Akanakisa Open Open Source Vhidhiyo Mitambo | Linux Vakapindwa muropa
MuLxA tanga tichitaura zvakawanda nezvazvo mitambo yemavhidhiyo yeLinuxIwe unotoziva kuti ivo vakura zvakanyanya muhuwandu mumakore achangopfuura uye kune mamwe mazita anodarika zviuru zvishanu anowanikwa pane Steam, pakati pezvimwe zvitoro zvepamhepo zvevatambi. Zvakanaka, nhasi tichaenderera mberi neiyi nhaurwa muchinyorwa chino, asi tichiona kubva pane imwe nzira yekuona. Munguva yakapfuura takaita posvo nezve yakanakisa yemavhidhiyo mitambo inowanikwa yeLinux ...
Ino inguva yekuita iyi imwe iyo yatinozvipira isu zvakanyanya kune iyo software uzivi hwatinoda zvakanyanya uye isu tiri kuzopa rondedzero ne mazita emavhidhiyo akanakisa yeLinux, asi ayo ari zvakare yakavhurwa sosi kana yemahara. Nekudaro, vatambi vanozokwanisa kunakidzwa nekuvaraidzwa kunopihwa nemazita aya pasina "kutadza" uye nekushandisa software yekambani senge mazhinji emitambo yemavhidhiyo yatinowana nhasi.
Zvakanaka pano tinoenda neizvi list yemitambo yakanakisa yakavhurwa sosi yemavhidhiyo:
0 ad.: Kuzivana neiyi blog, sezvo isu tataura pane akati wandei nezve ino chaiyo-nguva nzira yemavhidhiyo mutambo wakatarwa nezera reEmpires uye kuti ndakave nemufaro wekuyedza.
CoreRED: Alien Arena: mutambi wevazhinji wekutanga munhu shooter vhidhiyo mutambo pamwe nekubata kweQuake uye Unreal Tournament.
Armagetron Yepamberi- Kune vateveri veTron, pano panouya uyu wevazhinji uye 3D vhidhiyo mutambo.
Hondo yewesnoth: ndeye-yekutendeuka-based strategy vhidhiyo mutambo, kune avo vako vanoda iyi genre.
Mugomba Kukambaira Sopu: kana zvakare DCSS iroguelike kana mugomba yekutsvaga mutambo wevhidhiyo wauchada.
FreeCiv: idombo reyakakurumbira zano vhidhiyo mutambo weBudiriro II iyo inokutendera iwe kutamba mune imwechete-mutambi uye multiplayer.
Hedgewars: Mune ino kesi, iri dombo reWorms, yakakurumbira honye mutambo wevhidhiyo uyo wakabudirira kwazvo, uye chokwadi ndechekuti ino -tendeuka-based artillery mutambo wakakosha ...
MegaGlest- Real-nguva zano revhidhiyo mutambo uyo unosimbisa huru hondo uye paakaita adventures.
minetest: Kana iwe uchida Minecraft-mhando yekutsvaga uye kuvaka mitambo yemavhidhiyo, iwe uchafarira uyu mutambo wevhidhiyo watakatotaura nezvake muLxA.
OpenRA: imwe yatakasangana nayo pane ino blog. Iyo chaiyo-nguva zano revhidhiyo mutambo mune yakachena dhizaini yeAge yeMambo, Warcraft uye Command & Kunda. Kunyanya, iko kumisazve kuitiswa kweRed Alert.
VhuraRCT2: RollerCoaster Tycoon 2 inonzwika iwe kujairira iwe? Iyo simulator uko iwe uchafanirwa kugadzira nekugadzirisa epaki dzekutandarira. Imwe yatakatotaura nezvayo muLxA ...
OpenTTD: isu tinoenderera mberi neTycoon, mune ino kesi, bhizinesi simulator uko iwe kwaunogona kubata yako kambani uye kuwana purofiti.
sauerbraten: kuseri kwezita risingazivikanwe iri rekutanga uye rakanakisa rekutanga munhu shooter vhidhiyo mutambo (asina kuroorwa uye multiplayer). Zvakafanana nemazita senge Assault Cube kana Urban Terror.
Super Tux Kart: kana iwe uchida Mario Kart, uye isu tichichinja Mario kune hushamwari Tux ... mhedzisiro uyu mujaho wevhidhiyo mutambo.
pingus: Iyo yakasarudzika uye ndinofunga mazwi haana basa, saka ndinogona kutaura zvishoma nezve iri zita rakafemerwa neveMemings.
Teeworlds: 2D shooter yakafanana nemitambo yemavhidhiyo saMario Bros ... ndiko kuti, mapuratifomu.
Rima Mod: munhu wekutanga-munhu vhidhiyo mutambo wakanangana nenyika ine rima uye inonakidza mune dhizaini yeMbavha.
Saga reRyzom: yakasarudzika uye ine simba nyika yekurwira nekurarama akawanda mauya, aine mhando yakanaka ...
Warsaw- Mumwe mupfuri akafuridzirwa neQuake, asi akatarisa pakumhanya uye kufamba.
Xonotic: uye isu tinopera neimwe Unreal Tournament teki yekupfura, iine zvombo gumi nezvitanhatu zvekusarudza kubva uye nehondo zhinji dzekunakidzwa ...
Kune akawanda, uye ini ndinokukoka iwe siya zvirevo nemamwe mazita aya kana iwe uchiziva ivo ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Yakanakisa yakavhurwa sosi yemavhidhiyo mitambo
Ini ndinorangarira OpenArena iyo yandinofunga yakamiswa kwenguva yakareba asi yaive Quake III Arena mhando yekutanga munhu shooter yaishanda pamakomputa-zviwanikwa makomputa (ndakairidza pasina matambudziko pane HP Compaq nx9030 laptop ine Intel Extreme Graphics 2 kadhi anenge makore masere apfuura)
Ndatenda zvikuru nemupiro wako David! ;)
Wesnoth uye Sauerbraten, vandinoda.